Khudbadda Islamabad Khabiir: Waxkasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Mashiinka Raadinta
Qodobbada casriga ah ee raadiyaha s u muuqan karo, laakiin makiinadaha ayaa bixiya macluumaad yar oo ku saabsan natiijooyinka la rabay ama gaadiidka tayada leh ee si joogto ah. Inta badan, matoorada raadinta waxay na siiyaan macluumaadka ku saabsan SEO iyo sida loo hagaajin karo goobtaada. Mashiinka raadinta waa barnaamij software gaar ah oo kaa caawinaya raadinta bogagga internetka ee ku saleysan ereyada muhiimka ah ee aad u qoondaysay.
Michael Brown, oo ah takhasus sare oo ka socda Semt , wuxuu diiradda saarayaa xaqiiqda ah in makiinadaha raadinta ay ku maraan xogtooda macluumaadkooda oo ay ku helayaan natiijooyinka ugu saxsan. Sidoo kale, waxay qabtaan hawlaha kala duwan, sida bogagga shabakada, dhisida miisaanka, iyo bixinta dadka isticmaala liis ay ku qoran yihiin boggaga caanka ah sida raadraackooda iyo ereyada muhiimka ah. Joogitaan kasta waa dokumantiga gaarka ah (pdf, bogga internetka, jpg, ama kuwa kale), makiinadaha raadiyeyaashu waxay ku socdaan bogga oo dhan iyagoo isticmaalaya dukumintigan - ruby slots reviews. Waxay bixiyaan joogsi buuxa oo ay ku ogaanayaan tayada backlinks ee bogag kala duwan.
Labada hawlood ee asaasiga ah ee makiinadaha raadinta waa:
1. Calaamadaha iyo taranka bogagga: makiinadaha raadinta maalinlaha ah waxay ku socdaan malaayiin dukumiintiyo, bogag, wargeysyo, fiidiyow, faylasha, iyo warbaahinta.
2. Bixinta jawaabaha saxda ah: makiinadaha raadinta waxay sidoo kale bixiyaan jawaabta su'aalaha user ee foomka liisaska iyo bogaga ku habboon ee ay soo qaataan oo ay darajo ku haboon yihiin
Google iyo makiinadaha kale ee raadinta waxay ku talinayaan waxyaabaha soo socda:
1. Ku samee boggaga ugu horeyn ee booqdayaashaada, ma aha makiinadaha raadinta. Waa inaadan khiyaanaynin dadka isticmaala oo ka fogow soo bandhigista sheeko beenta ah rikoodhka sare ee raadinta raadinta .
2. Kobcin boggaga internetka oo leh dariiqa cad iyo xiriirinta qoraalka tayada leh. Dhammaan bogagga waa in la akhrisan karo oo la gaari karaa ugu yaraan hal xiriiriye ah qoraalka..
3. Waa inaad abuurto bogga internetka ee macluumaadka, faa'iido leh, oo qor qoraalada si sax ah u sharaxaya alaabadaada iyo adeegyadaada.
4. Waa inaad isticmaashaa ereyada muhiimka ah iyo odhaahyada si aad u horumarisid URL-kan aadka u-saaxiibtinimo iyo sharraxaad. Waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo hal keli ah oo keliya URL si markaa loo adeegsado aan loo dirin 301 bog oo ay ugu wacan tahay mawduucyada kala duwan.
Miyay Iskuulada Raadinta iyo Raadiyeyaasha la mid ah?
Wershadaha webka iyo makiinadaha raadinta ma ahan kuwo isku mid ah, laakiin labada shuruudood waxay helayaan waqti caan ah. Mararka qaarkood, dadku waxay isku wareeriyaan sida loo kala saaro daalacayaasha webka iyo makiinadaha raadinta. Aan halkan iigu sheego in mashiinnada raadinta ay si toos ah u abuurayaan liisaska boggooda iyaga oo leh caawimo ah dhirta iyo caarada. Waxay muujiyaan macluumaadka waxayna raacaan xiriirinta boggaga si ay u gaaraan boggaga internetka ee kale. Baadhitaanada mashiinka raadinta waxay ka helayaan bogagga shabakadaha iyadoo loo marayo backlinks, sidaas darteed dadka isticmaala waa inay soo gudbiyaan waxyaabaha ay ku duuban yihiin shabakadaha internetka si ay u nuugaan caarada iyo bots. Way fiicantahay in gacanta loo geliyo boggaga internetka sida tusaalaha Yahoo iyo ka caawinta mashiinnada raadinta raadso boggaga internetka.
Sidee makiinadaha raadiyuhu u go'aamiyaan caan iyo mawaadiic
Google, Bing, Yahoo iyo makiinadaha kale ee raadinta, waxay ku xirantahay macnaha ereyada muhiimka ah iyo odhaahyada. Waxaa jirey waqtiyo markii makiinadaha raadinta ay na siiyeen xog kooban. Haatan injineerada qibrada leh iyo kuwa khibrad leh waxay soo bandhigeen qaababka loo siman karo natiijooyinka si ay u weydiiyaan su'aalaha dadka isticmaala si hufan. Boqollaal kun oo arrimood ayaa hadda saameyn ku leh xiriirka, mashiinnada raadinta waxay ku qaadaan in bogagga caanka ah ee ugu caansan ay ku jiraan xogta ugu habboon ee saxda ah. Tani waxay u muuqatay inay cadeeyeen inay ku guuleysteen isticmaalka ku qanacsanaanta Google, Bing, iyo Yahoo. Mashiinnada raadinta waxay isticmaalaan algorithms gaar ah si ay u kala saaraan boggaga internetka, iyo kuwan algorithms ka kooban boqolaal kun oo kun oo doorsoomayaal ah. Suuqa baayacmushtarka, khabiiradu waxay u gudbinayaan algorithms inay yihiin qodobada kala sareynta.
Waxaa jira tiro makiinado raadin oo cajiib ah si ay u kala doortaan, laakiin kuwa ugu fiican ayaa lagu sheegay hoosta
100 Makiinadaha Raadinta ee 100 Maalmood - Kuwani waa matoorada raadinta oo dhan, kuwa matoorka raadiya, iyo matoorada raadinta. Waxaad ka heli kartaa dhammaantood internetka.
Sida loo Xoqo Mashiinka Raadinta: Waxaa lagama maarmaan ah in la qaado mashiinka raadinta ugu wanaagsan ee Search Engines 101, taas oo ah hab aad u fiican oo sahaminta mowduucyada raadinta, isku day tijaabooyinka cusub ee raadinta iyo inaad ogaato sida ugu fiican shabakada adduunka oo dhan.
Marka lagu daro talooyinkan iyo talooyinkan, suuqyada raadiyeyaasha raadinaya waxay soo heleen hababka sida loo soo saaro macluumaadka ku saleysan darajadooda. Hadda, suuqyada iyo SEOs waxay isticmaalaan qawaaniin iyo xog gaar ah si ay u caawiyaan boggooda internetka iyo blogka inay gaaraan meel wanaagsan oo ku habboon natiijooyinka natiijooyinka raadinta raadinta . Si cajiib leh, matoorada raadinta waxay taageertaa dadaallo kala duwan oo waxay dadka siiyaan talooyin wax ku ool ah. Xitaa wakiillada raadinta waxay caawiyaan websaydhada iyo bloggers iyagoo ka qaybqaatay qoraallo blog, forum iyo wada hadal kooxeed.